Xus loo sameeyey 13-guuradii kasoo wareegtay aasaasihii saxaafadda Somaliland oo Hargeysa lagu qabtay
» Xus loo sameeyey 13-guuradii kasoo wareegtay aasaasihii saxaafadda Somaliland oo Hargeysa lagu qabtay
Xus balaadhan ayaa loo sameeyey aasaasihii saxaafada iyo qoriyatul qawlka Somaliland, Maxamuud Cabdi Shide, oo ahaa guddoomiyihii u horeeyey wargeyska Jamhuuriya oo ka soo baxa magaalada Hargeysa. Maxamuud Cabdi Shide ayey saxaafada Somaliland u aqoonsatay inuu yahay aasaasihii warbaahinta Casriga ah, waxaana sanad kasta maalintan oo kale lagu xusaa, si ummadda loo xasuusiyo kaalintii uu saxaafada kaga jiray. Xafladan ayaa waxa soo qabanqaabiyey wargeyska Saxafi, waxaana munaasibadaa iskugu yimid, suxufiyiin, aqoonyahano, Siyaasiyiin iyo marti sharaf farobadan. Munaasibada lagu xusayo 13 guuradii ka soo wareegtay geeridii Marxuuum: Maxamuud Shide oo ku beegnayd November 09, 1998, ayaa maanta lagu qabtay Hotel Guuleed ee magaalada Hargeysa.
Ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay rag badan oo ay soo wada shaqeeyaan wakhtiyadii saxaafadu socod baradka ku jira, waxaana ka mid ahaa qoraa Boobe Yuusuf Duceel oo wakhti badan soo qada shaqeeyeen, "Maxamuud wuxuu ka mid ahaa foolaadkii saxaafada, waxaana sanadkii 1997 kii ka wada shaqayn jirnay Wargeyska Jamhuuriya, wuxuu ahaa nin adag, muu ahayn dadka wax xanta balse waxa uu sheegayo qofka hortiisa ayuu ku odhan jiray" ayuu yidhi Boobe, isagoo sii wata waxa uu yidhi" Maxamuud waxa uu dalka keenay dhiishkii ugu horeeyey ee satellite ka ku xidhan oo aanu wararka ka diyaarin jirnay". "Marxuumku waxa uu waday taalo uu doonayey inuu halkan ka sameeyo oo ah fooq saddex dabaq ah oo dhakada sare ka saaran yahay sawirkartoonka dhanxiir oo ka samaysan looxaan uu dibada ka keenay oo ujeedda guriga madaxtooyada, balse nasiib daro gurigaasi muu dhismin"ayuu yidhi. Sawir kartoonkan dhanxiir ayaa ah sawir labada weji leh oo hadba wadciga lagu jiro ka hadla, waxaanu ku soo bixi jiray jaraa’id, isagoo matalaya qof mucaarad iyo qof muxaafad ah, isaguna iskugu jawaabayo oo dadku aad u jeclaayeen. Mar kale isagoo Boobo sharaxayo shaqadii adkaa ee marxuumka waxa uu yidhi, "Wuxuu soo saari jiray barnaamij toddobaadkii soo baxa oo la odhan jiray faaqidaada toddobaadka, kharashkasta wargeyska ku baxaya waxa si gaar ah u bixin jiray alla ha u naxariistee Marxuum shide, waxa wakhtigaasi jaraa’idku soo saari jiray 5200 oo koobi oo gobolada loo kala diro, waxa uu biilin jiray fanaaniinta iyo dhalinyarada jabhadda ahayd ee qoriga sidatay, "ayuu yidhi Boobe Yuusuf oo ah nin qoraaya. Waxaa isaguna taariikhdii marxuumka ka waramay Xildhibaan Cabdiqaadir Jirde oo ka mid ah golaha Wakiilada Somaliland, waxaanu ka sheekeeyey marxaladihii usoo maray, waxaanu sheegay inuu ahaa nin jecel inay dadku wax qoraan, " waxa uu marxuumku barigaa iga codsaday in jaraa’idka uu qoraalo ku qora ana waan ka aqbalay oo barigaa waan ka faa’iiday oo qoraalo badan ayaan sameyey, wuxuuna ahaa nin dadka baray sida wax loo qoro"ayuu yidhi. Xoghayaha ururka Saxaafadda ee Solja Maxamed-Rashiid Muxumed Faarax oo in badan ay soo wada shaqeeyeen ayaa tilmaamay inuu ahaa deeqsi qof walba wax siiya, isla markaana hirgaliyey saxaafada casriga ah ee Somaliland, isagoo sheegay inuu ka bedelo waraaqihii yaryar ee ay ku soo saari jireen una bedelay in laga dhigo waraaqo A3, waxaanu keenay madbacada weyn oo jaraa’idku ku daabacaan.
Guddoomiyaha Ururka Saxaafada Somaliland Solja, Xasan Maxamed Yuusuf ayaa sheegay inuu ahaa aasaasihii saxaafada madaxa banaan, isago xoog iyo dhaqalaaba wuxuu lahaa galiyey siday u shaqayn lahayd warbaahinta madaxa banaan.
Dhamaan dadkii halkaasi ka hadlay ayaa xusay inuu ahaa halbawlaha Saxaafadda, isagoo intii uu noolaa wakhti badan galiyey sidii ay saxaafaddu u noqon lahayd awood ay wax ku hagto, illaahayna loo waydiiyey inuu u naxariisto. Barkhad-ladiif M. Cumar, Hiiraan Online